> Resource > iPod > Sida loo Undelete Faylal ay ku iPod xiriiri 4 & 5 iPod taabashada
Sidee baan undelete karaa iPod xiriiri 4 faylasha?
Waxaan la isticmaalayo ah iPod xiriiri 4 iyo ay u shaqayso ganaax waqtiga oo dhan. Nasiib ayaan la tirtiro sawirrada ah oo dhan aan ku yaal oo ay howlgal qaldo. Hadda waxaan iyaga ku doonayaan daafaca! Ma suroobi karaa waddo? Sidee baan iyaga undelete karaa? Fadlan ii caawin. Oo kulligood waa la xiriira in aan ina yar ee 1da dhalashadiisa.
Si undelete file xiriiri iPod, waxaa jira laba siyaabood. Tan koowaad waa in ay iyaga undelete kaga imaanayo Lugood ah. Sida dhammaan dadka isticmaala qalabka macruufka ogahay, Lugood abuuraa gurmad ah u qalab kasta macruufka isagoo synced la. Kale waa in si toos ah iyaga undelete ka iPod xiriiri laftiisa. Haddii aadan haysan gurmad Lugood ah, ama waxaad ka Halmaamaan si ay u hagaagsan oo Lugood dib markii idin abuuray xog cusub oo ku saabsan qalab aad, mid labaad uu noqon doono fursada fiican.
Si undelete files si toos ah uga iPod taabto, waxaad u baahan tahay caawimo ka soo qalab undeleting xogta iPod taabto marka hore. Waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah halkan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) . Waxaad u isticmaali kartaa in xiriir undelete, iMessages, qoraalo, sawiro, video, jadwalka taariikhda, xusuusinta, cadaymaha cod iyo Bookmarks Safari ka iPod xiriiri 4. sokow, waxay sidoo kale ha idin ​​undelete xiriirada, iMessages, qoraalo, jadwalka taariikhda, xusuusinta iyo Bookmarks Safari ka aad iPod xiriiri 5.
Fiiro gaar ah: Marka aad la tirtiro xogta laga qalab aad aan gurmad kasta, joojiso isticmaalka qalabka ugu dhaqso badan. Waxaa Dejinta galay hab horyaalka noqon doonaa doorasho wanaagsan. Markaas waxaad heli doontaa fursad weyn ay u soo ceshano xogta aad laga badiyay.
Hadda, bal aynu hubi sida loo undelete xogta xiriiri iPod la version Windows ee tallaabooyinka. Haddii aad tahay qof user Mac ah, oo aad samayn kartaa si la mid ah aad Mac.
Tallaabada 1. Isku aad iPod taabto oo iskaan
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka on your computer, waxaa u ordaan oo xiriiriyaan iPod taabto. Suuqa ayaa hoose wuxuu muujinayaa sida soo socota.
Wixii iPod xiriiri 5: Riix Start Scan si toos ah u iskaan.
Wixii iPod taaban 4. Click Download si aad u hesho a fur-in marka hore. Markaas raac tilmaanta si aad ugu qortid hab iskaanka aad iPod taabashada ee:
Hay iPod taabto oo guji badhanka Start;
Home Press iyo Power badhamada waqti isku mid ah ee saxda ah 10 seconds;
Fur button Power 10 ilbiriqsi ka dib, Laakiinse ay xajiyaan riixaya badhanka Home for kale 15 seconds;
Marka aad xusuusinayaa in aad si guul leh ku soo gashay habka qalabka, waxaad sii daayo karaa button Home ah. Iyo barnaamijka isla markiiba iskaan doonaa qalab aad ahaantiisa.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo undelete files on iPod taabashada
Skaanka aad baabbi'in doonaa in yar. Waxaa ka dib, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta la marsiiyey aad iPod taabto, oo ay ku jiraan kuwa la tirtiro dhawaan iyo kuwa aad iPod xiriiri hadda. Waxaad u kala sooci karaa iyada oo la isticmaalayo button slide hoose: Kaliya bandhigaan waxyaabaha la tirtiro, haddii aad u baahan tahay. Markaas calaamadee kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Si looga fogaado ka iPod xiriiri badiyay xogta, ha xasuuso inaad si joogto ah dib u up on your computer.
Sidee si ay u gudbiyaan Non iibsaday Music ka iPod in Computer